नेपालीहरू शतप्रतिशत फेसनेबल छन् - अन्तरवार्ता - साप्ताहिक
नेपालीहरू शतप्रतिशत फेसनेबल छन्
नेपालको फेसन तथा मोडलिङमा आबद्ध व्यक्तिहरूका लागि विशाल कपुर कुनै नौलो नाम होइन । कपुर भारतका सुप्रसिद्ध फेसन डिजाइनर हुन् । मुम्बईमा बसोबास गर्ने विशाल कपुरले थुप्रै बलिउड सेलिब्रेटीका लागि पहिरन डिजाइन गरेका छन् । पछिल्ला सात वर्षदेखि उनका डिजाइन नेपाली बजारमा समेत उपलब्ध छन् । सात वर्षअघि काठमाडौंको दरबारमार्गमा कपुरले पनाचे रनवे नाममा आफ्ना डिजाइनको स्टुडियो नै सञ्चालनमा ल्याएका थिए ।
पनाचे रनवे शीर्षकमा काठमाडौंमा केही फेसन शोसमेत सञ्चालन गरिसकेका कपुरले निकट भविष्यमै पोखरा तथा धरानमा समेत आफ्नो डिजाइनर वेयरको स्टुडियो खोल्ने योजना बनाएका छन् । दसैंको पूर्वसन्ध्या पारेर साप्ताहिकका कृष्ण भट्टराईले मुम्बईमै रहेका डिजाइनर कपुरसँग अनलाइन कुराकानी गरेका थिए । नेपालको फेसन, मोडलिङ तथा पहिरनसम्बन्धी विषयमा केन्द्रित उक्त कुराकानीको प्रमुख अंश :
अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?
म यतिबेला आफ्ना केही नयाँ प्रोजेक्टमा व्यस्त छु । मुम्बईमा भर्खरै एउटा नयाँ स्टोर लञ्च गरेको छु । डोर १८५ नामको यो स्टोर अत्याधुनिक अवधारणामा आधारित छ, जहाँ फेसन स्टोरसहित टि लाउञ्ज पनि छ ।
फेसन डिजाइनिङमा चाहिं कत्तिको व्यस्त हुनुहुन्छ ?
विभिन्न थिम तथा अवधारणामा आधारित नयाँ डिजाइन तथा कलेक्सन सिर्जना गर्न दिन–रात तल्लीन भैरहेको हुन्छु ।
डिजाइनमा नयाँ के गर्दै हुनुहुन्छ ?
डिजाइनरको दिमागमा सधैं नै नयाँ–नयाँ भिजन आइरहेको हुन्छ । ममा पनि त्यस्ता भिजन आइरहेकै हुन्छन् । म जहिले पनि नयाँ ट्ेरन्ड थालनी गर्ने प्रयत्नमा रहन्छु । समकालीन फेसन ट्रेन्डलाई ध्यानमा राख्दै निकट भविष्यमै केही उत्कृष्ट डिजाइनसहित बजारमा आउने तयारी गर्दैछु ।
तपाईंको विचारमा फेसन भनेको के हो ?
फेसन भनेको स्टाइल स्टेटमेन्ट हो, जसलाई हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्टाइलमा रूपान्तर गर्न सक्छ, ढाल्न सक्छ तथा सिर्जना गर्न सक्छ ।
लामो समयदेखि नेपाललाई पनि तपाईंले आफ्नो कार्यक्षेत्र बनाउनुभएको छ । तपाईंको विचारमा नेपालीहरू कत्तिको फेसनेबल छन् ?
म विगत सात वर्षदेखि नेपालको फेसन व्यवसायमा आबद्ध छु । यो अवधिमा मैले के अनुभव गरेको छु भने नेपालीहरूमा फेसनको राम्रो सेन्स तथा टेस्ट छ । फेसन उद्योगमा आएका पछिल्ला शैलीलाई तुरुन्तै अपनाउने नेपालीहरूको बानी छ । यो असाध्यै सुखद पक्ष हो । यस अर्थमा भन्नुपर्दा नेपालीहरू शतप्रतिशत फेसनेवल छन् ।
नेपालमा महिला र पुरुषमध्ये कसलाई बढी फेसनेबल पाउनुभएको छ ?
आजको समयमा कुनै पनि क्षेत्रमा महिला तथा पुरुष भनेर विभेद गरिनु उचित छैन । फेसनको प्रसंगमा त झन् छँदै छैन । किनभने महिला हुन् अथवा पुरुष, जो पनि फेसन भनेपछि हुरुक्क हुन्छन् । हरेकलाई आफू भीडमा अलग देखिउँ भन्ने चाहना हुन्छ, सबैले आफैंलाई मार्क गरून् भन्ने चाहना हुन्छ । महिला र पुरुष मात्र होइन बालबालिकादेखि वृद्ध–वृद्धासम्ममा यो कुरा लागू हुन्छ ।
प्राय: युवाहरूले मात्र फेसन ट्रेन्डलाई पछ्याएको पाइन्छ, अरू उमेरका व्यक्तिलाई चाहिँ फेसनेबल हुन मन नलाग्ने हो र ?
त्यस्तो होइन । युवापुस्ता फेसन ट्रेन्डलाई पछ्याउने प्रसंगमा चाहिं सधैं अघि हुन्छ । फेसन डिजाइनरहरूले पनि युवापुस्तालाई नै ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिरहेका हुन्छन् । यद्यपि पाका उमेरका व्यक्तिलाई पनि डिजाइनर वेयरमार्फत आकर्षक बनाउन सकिन्छ ।
नेपाली युवाहरूलाई कस्तो फेसन सुहाउँछ ?
नेपाली युवाहरू त्यसै पनि स्मार्ट छन् । फेसनको प्रसंगमा त उनीहरू थप स्मार्ट पाइन्छन् । इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जालका कारण युवाहरू सधैं आफूलाई अपडेट गरिरहेका हुन्छन् । त्यहाँ उनीहरूले फेसन सम्बन्धि असंख्य टिप्स तथा जानकारी पाइरहेका हुन्छन् । उनीहरूले के मात्र ध्यान दिनु आवश्यक छ भने कस्तो अवसर तथा समारोहमा कस्तो पहिरन लगाउने ? औपचारिक समारोहमा कस्तो पहिरन लगाउने, पार्टिमा कस्तो लगाउने भन्ने कुराको ज्ञान हुनु आवश्यक छ । युवाहरू साधारण अथवा स्लिम फिट टिसर्टसँग ह्याट लगाउँदा स्मार्ट देखिन्छन् भने युवतीहरू क्रप टप्ससँग स्कार्फ तथा ड्राप्ट पाइन्ट अथवा रेट्रो स्कर्ट लगाउँदा पनि स्टाइलिस देखिन्छन् ।
तपाईंलाई नेपालीहरू कत्तिको स्टाइलिस लाग्छन् ?
नेपालीहरू स्टाइलिस मात्र होइन बोल्ड पनि छन् ।
महिला र पुरुषमा कसलाई बढी स्टाइलिस पाउनुभयो ?
पुरुषभन्दा महिलालाई नै बढी स्टाइलिस पाएको छु । वास्तवमा पुरुषहरूका लागि डिजाइनर वेयर असाध्यै कम छन् । म के कुरामा ढुक्क छु भने यदि पुरुषहरूका लागि पनि प्रसस्त डिजाइन तथा स्टाइल तयार पारियो भने स्टाइलिस पुरुषको संख्या निश्चित रूपमा बढ्नेछ ।
नेपालका मोडलहरूलाई कत्तिको व्यवसायिक पाउनुभएको छ ?
केही मोडल असाध्यै प्रोफेसनल तथा डेडिकेटेड छन्, तर त्यो संख्या औंलामा गन्न सकिने
मात्र छ ।
काठमाडौंको तपाईंको फेसन व्यवसाय कस्तो चलिरहेको छ ?
यतिबेला मेरो एउटा एक्स्क्लूसिभ शोरुम पनाचे रनवे काठमाडौंको दरबारमार्गमा सञ्चालनमा छ, जहाँको व्यवसायबाट म सन्तुष्ट छु । यसबाहेक चाँडै नै म यसलाई पोखरा तथा धरानमा समेत विस्तार गर्ने योजनामा छु । नेपाली ग्राहकहरूबाट आएको असाध्यै सकारात्मक प्रतिक्रियापछि नै म आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्ने निर्णयमा पुगेको हुँ ।
पनाचे रनवेका उपभोक्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सर्वप्रथम त मेरा पहिरन मन पराइदिनुभएकोमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई भित्री ह्दयदेखि नै धन्यवाद । पनाचे रनवेमा मैले सकेसम्म आफ्ना पछिल्ला सिर्जनाहरू प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिरहेको छु । म भविष्यमा यसलाई अझ विस्तार गर्ने पक्षमा छु र नेपालको फेसन उद्योगमा आवद्ध नयाँ–नयाँ प्रतिभाहरूलाई समेत अवसर दिइ नै रहनेछु ।
मुम्बईबाट काठमाडौंसम्म आफ्नो फेसन उद्योगलाई विस्तार गर्ने सोच कसरी आयो ?
नेपाल र भारतका युवा–युवतीहरूको फेसन शैलीमा खासै अन्तर छैन । नेपालको राजधानी काठमाडौं फेसन भनेपछि हुरुक्क हुन्छ भन्ने कुरा मैले राम्रोसँग बुझेको छु । यहाँका मानिसहरूको फेसन क्रेज देखेरै मैले आफ्नो व्यवसायलाई काठमाडौंमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको थिएँ । त्यसमा म सफल पनि भएको छु ।
पछिल्लो समय मानिसहरू डिजाइनर वेयरप्रति आकर्षित छन्, यो आकर्षणलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
वास्तवमा आकर्षक डिजाइन तथा गुणस्तरीय डिजाइनर वेयरले व्यक्तिको लुक्समै ट्विस्ट ल्याउँछ । जसले जो कसैको व्यक्तित्वलाई बेग्लै उचाइ प्रदान गर्छ । अहिले काठमाडौंमा पनि वैवाहिक समारोह, पार्टि तथा चाडपर्वहरूमा डिजाइनर वेयरको प्रचलन बढ्दै गएकोमा मलाई खुशी लागेको छ ।
दसैं–तिहारजस्ता पर्वलाई फेसनसँग कसरी जोड्नुहुन्छ ?
नेपालमा होस् अथवा भारतमा दसैं–तिहारजस्ता चाडपर्वमा पहिरनको विशेष महत्व हुन्छ । नेपालमा दसैंमा बढि पहिरन खपत हुन्छ भने भारतमा तिहारमा । हामी डिजाइनरहरूले पनि यी दुई चाडपर्वलाई ध्यानमा राखेर नयाँ–नयाँ डिजाइनर तयार पार्छौं । बहुसंख्यक मानिस यी चाडपर्वमा पहिरन किन्न चाहन्छन् । यो अवसरमा गुणस्तरीय कपडाबाट तयार भएका पहिरन छनोट गर्न सक्नुपर्छ ।
दसैंमा नेपालीहरू अत्यधिक पहिरन किन्छन् । उनीहरूलाई तपाईं कस्तो सुझाव दिन चाहनु हुन्छ ?
अवश्य पनि दसैं नेपालको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पर्व हो, यतिबेला नेपालीहरू नयाँ–नयाँ पहिरनमा खर्च गर्न पछि पर्दैनन् । सबैलाई मेरो सुझाव के छ भने पहिरन किन्दा दिमागमा दुईवटा कुरा राख्नुपर्छ, पहिलो–सबैभन्दा पछिल्लो स्टाइल, त्यसमा खेलिएको रंग, कट तथा स्टाइलमा ध्यान दिनु होला । दोस्रो–तपाईंले किनेका पहिरनको डिजाइनलाई समिश्रण गर्न सकियोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनु होला ।
फेसनले व्यक्तिको व्यक्तित्वमै आमूल परिवर्तन गर्ने कुरामा कत्तिको विश्वास गर्नु हुन्छ ?
यदि एक जना व्यक्तिलाई उसको आवश्यकताअनुसार फेसन ग्रुमिङमा आधारित भएर उचित ट्रिटमेन्ट गरिएको खण्डमा व्यक्तित्व परिवर्तन गराउन सकिने कुरामा दुईमत छैन ।
मानिसले आफूलाई कस्तो पहिरन सुहाउँछ भन्ने कुराको जानकारी कसरी प्राप्त गर्ने ?
फेसनको प्रसंगमा यो असाध्यै महत्वपूर्ण कुरा हो । हरेक व्यक्तिलाई आफू कस्तो पहिरनमा स्मार्ट अथवा सुन्दर देखिन्छु भन्ने कुराको जानकारी हुनु अत्यावश्यक छ । कहिलेकाहीं प्रयोगबाट पनि राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ र सामान्यभन्दा राम्रो देखाउन सकिन्छ । यदि कसैलाई यो कुराले द्विविधामा पारेको छ भने सोझै कुनै अनुभवी फेसन डिजाइनरसंग सल्लाह माग्न सकिन्छ अथवा फेसनमा आधारित पत्रपत्रिकाबाट पनि धेरै कुराको जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । मचाहिं के भन्न सक्छु भने मोटा मानिसहरूले गोलो धर्का भएका पहिरन त्याग्नु उचित हुन्छ भने होचो कद भएका व्यक्तिले ठाडो धर्का भएका पहिरन लगाउनु पर्छ । गोलो धर्का भएका पहिरनले मोटा व्यक्तिलाई थप मोटो देखाउँछ भने होचो कदका व्यक्तिले लामो धर्का भएका पहिरन लगाउँदा उचाइ बढेजस्तो प्रतीत हुन्छ ।
के फेसन सबै उमेरका व्यक्तिका लागि सम्भव छ ?
फेसन भनेको सबैका लागि हो, यसमा उमेर र लिंगका आधारमा कुनै भेदभाव हुँदैन । सुन्दर तथा आकर्षक देखिन पाउनु हरेक व्यक्तिको अधिकारको कुरा हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने ‘के, कसरी तथा कहाँ लगाउने ?’ पहिरनका बारेमा यी तीनवटा कुराको जवाफ थाहा पाउन सकियो भने जो कोही पनि आकर्षक तथा सुन्दर देखिन सक्छन् ।
नयाँ पहिरन डिजाइन गर्ने क्रममा के कुरामा बढी ध्यान दिनुहुन्छ ?
कम्फर्ट लेभल, इलिगेन्स, कट तथा ड्रप्स विद प्रोपर फल हामी डिजाइनरहरूले ध्यान दिनुपर्ने प्रमुख चार पक्ष हुन् । कहिलेकाहीं म आफ्ना साथीभाइ तथा ग्राहकहरूबाट पनि प्रभावित भैरहेको हुन्छु ।
तपाईं फेसन ट्रेन्डलाई पछ्याउनुहुन्छ कि फेसन ट्रेन्डले तपाईंलाई पछ्याउँछ ?
डिजाइनरका रूपमा म आफैं ट्रेन्ड सिर्जना गर्छु, जसलाई मानिसहरूले मन पराउनु हुन्छ र त्यसलाई पछ्याउनु हुन्छ ।
डिजाइनिङको क्षेत्रमा तपाईंका योजनाहरू के–के छन् ?
म भविष्यमा पनाचे रनवेमार्फत नयाँ–नयाँ प्रतिभाहरूलाई अगाडि ल्याउन चाहन्छु । यसका लागि मैले काठमाडौंलाई पनि मुख्य बजारका रूपमा लिएको छु ।
नेपालको फेसन डिजाइनिङ उद्योगको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ ?
मैले नेपालको फेसन उद्योगमा सात वर्ष बिताइसकेको छु । यो अवधिमा यो क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आएको मैले आफैंले देखेको छु । नेपालको फेसन डिजाइनिङ उद्योग दिन–प्रतिदिन उकालो चढ्दैछ । त्यसैले यसको भविष्य उज्ज्वल छ । त्यसका लागि हाम्रो पनि अझ बढि योगदान रहनेछ ।
अन्त्यमा, नेपालको फेसन तथा मोडलिङ क्षेत्रका बारेमा तपाईंको राय के छ ?
सिक्ने कुरा कहिल्यै सकिँदैन, आफूलाई अपग्रेट गर्दा जहिले पनि सफलता हात लाग्छ । फेसन र मोडलिङ उद्योगमा आबद्ध हरेक व्यक्ति जस्तो एजेन्सीदेखि फोटोग्राफरसम्म, मेकअप आर्टिष्टदेखि मोडलसम्म र इभेन्ट म्यानेजरदेखि कोरियोग्राफरसम्म सबैले आफ्नो पेशाप्रति कटिबद्ध हुनु आवश्यक छ । यति भए मात्र पनि नेपालको फेसन तथा मोडलिङले अन्तर्राष्ट्रिय उचाइ प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
साउनमा पिरिम पर्‍या छन्
विश्वकप हेर्न पाउने नेपालीहरू
बीपीले लेखेका चिठीहरू सुरक्षित छन्
हाम्रा सबै खेलाडी लयमा छन्
यस्ता छन्, डीपीएलका टिम
त्यो कालरात्रि नै थियो असार २८, २०७५
नेपालले विश्वकप खेल्न पाउने सम्भावना प्रशस्तै छ असार ४, २०७५
पहिलो नजरमै मनीषालाई एसाइन गरिसकेको थिएँ जेष्ठ ३१, २०७५
सगरमाथालाई तीन पटक ढोगेर माफी माग्छु जेष्ठ २४, २०७५
घरपरिवारले आशा मारेको थियो जेष्ठ १५, २०७५
नेपाल फर्कन आँट र सीप हुनुपर्छ जेष्ठ ८, २०७५